5 Yemagariro Nhanho Matanho Ekutengesa Vashandi | Martech Zone
China, November 12, 2009 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Sangana nemutengi nhasi anonzwisisa zvekutanga zveTwitter, Facebook, LinkedIn, nezvimwe uye ini ndaida kuvapa imwe mhinduro pane kutanga kushandisa vezvenhau zvinobudirira. Mutengi aive nyanzvi yekutengesa uye aida kutanga kutora mukana wepakati asi anga asina chokwadi chekuti aizoenzanisira sei zvaaida pabasa achikwidza danho renhau rezvemagariro.
Iri idambudziko rakajairika. Nzvimbo dzekudyidzana pasocial online hadzina kufanana neinternet network. Unosangana nevanhu, wobva waona zvinobatanidza, uye wozowana nekuvaka hukama nevanokurudzira uye netarisiro. Iwe haugone kungopinda muchiitiko chekutanga cheVanaya mvura woita izvi (Vanonaya mvura iri redunhu network network ine kukura kunoputika). Zvinotora nguva, zvinoda kumwe kuchera, uye pakupedzisira kukurumidza kutanga kuita purofiti kubva kunetiweki yako. Izvi ndezvechokwadi online sezvazviri pasina.
Matanho mashanu Ekubudirira Kushandisa Yemagariro Networking kuDhiraivha Kutengesa
Enda pamhepo: Vaka yako LinkedIn profile, vhura Twitter account, uye kana iwe uchida kumhanyisa maitiro (uye investa yakawanda nguva), tanga kunyora blog pane yako indasitiri. Kana iwe usina blog, wobva watsvaga mamwe mabloggi aunogona kupa.
Ziva Zvinobatanidza: Imwe nzira yekukurumidza yekutsvaga vanobatanidza muboka rako ndeyekubatana neinternet network senge LinkedIn. Pa Twitter, unogona kuita izvi na kutsvagisa ma hashtag uye kutsvaga vanhu vari kumashure kweaya ma tweets emabhizimusi. Zvishandiso zvemberi zvakadai se Radian6 inogona zvakare kubatsira pano!
Kune maBlog, shanduko dzichangoburwa kuenda kuTechnorati dzinogona chaizvo kukubatsira kudzikisira zvibodzwa zvako. Kuita blog kutsvaga kwezwi senge CRM kunogona kukupa iwe nerunyorwa rwema blog, kuitira mukurumbira! Wedzera izvi zvekupa kune ako aunofarira feed muverengi!
Vaka Ukama: Paunenge iwe uchinge waona zvinongedzo, tanga kuwedzera kukosha kune avo zvemukati nekuwedzera akakodzera mipiro kune kuburikidza makomendi uye ma tweets Usazvisimudzire ... ava havasi ivo vabereki kutenga zvigadzirwa zvako, ivo ndivo vachadaro taura nezve zvigadzirwa zvako uye masevhisi.
Kukwezva zvinotevera: Nekupa kuhurukuro uye masimba ekuvaka muindastiri yako - vanobatanidza vachataura nezvako uye vanokurudzira vachatanga kukutevera. Chinokosha apa kupa, kupa, kupa… haugone kupa zvakakwana. Kana iwe uchinetseka nezve vanhu vari kungoba ruzivo rwako nekurishandisa vasina kukubhadhara ... usadaro! Ivo vanhu havana kuzombobhadhara iwe, chero zvakadaro. Ivo avo wakaramba kubhadhara ndivo avo vachiri kuda.
Ipa iyo nzira kune Engagement: Apa ndipo panouya bhurogu chaizvo! Iye zvino zvaunenge uine kutarisisa kwevanhu, iwe unofanirwa kuvadzosa kumwe kunhu kuzoita bhizinesi newe. Kune blog, inogona kuve yekufona-ku-kuita mune yako yepadivi kana fomu yekubatana. Ipa mamwe ekunyora mapeji ekurodha pasi kana ewebhu. Kana pasina chimwe chinhu, ipa yako LinkedIn mbiri kuti ubatane navo. Chero chaunofunga, ingova nechokwadi kuti chiri nyore kwazvo kuwana… zviri nyore kubatana newe, vanhu vazhinji vanodaro.
Nzvimbo dzekudyidzana dzekugadzira kutengesa hadzianetsi asi zvinogona kutora nguva yakareba. Kungofanana nekuisa zvibodzwa zvekutengesa pasi pehuwandu hwekufona kwauri kuita, nhamba yemisangano yauri kuenda uye nhamba yekuvhara iwe urikuita… tanga kuisa pasi zvimwe zvinangwa pahuwandu hwemaindasitiri vanhu vauri kutsvaga, iyo nhamba urikutevera, uchibatana ne, uye uchipa kune. Paunenge iwe waunotora mutambo wako pa, kuzvipira kune muyenzi posvo kana uine iwo maoniki kana anokurudzira vashanyi posvo pane yako blog. Kutengesa vateereri inzira huru yekuwedzera yako network.
Sezvo iwe uchiramba uchishanda network yako uye nekuvaka hukama neinobatanidza uye vanokurudzira, iwe unowana ruremekedzo rwavo uye uzvizarurire iwe kumikana iwe yausina kumboziva kuti yaivapo. Ndiri kubvunza zuva nezuva izvozvi, kutaura nguva dzose, kunyora bhuku uye kuve nebhizinesi riri kukura - zvese zvakavakirwa kubva pasisitimu inoshamwaridzana pasocial network. Zvakatora makore kuti usvike pano - asi zvaive zvakakodzera zviripo! Shingirira!
Tags: online networkvashandi vekutengesakutengesa pasocial mediapasocial media networkkutengesa munharaunda
Chishandiso Chikurusa Mukushambadza!
Mbudzi 12, 2009 na3: 03 PM
Kuva anononoka kutora masocial media ruzivo urwu runogona kundibvumidza kuti ndiite basa nemazvo nenguva yandinoronga kushandisa pakuzvifambisa kuenda kumberi sehunyanzvi - hune hukama nenhau dzezvemagariro. Ndatenda nekuziva Doug.
Mbudzi 12, 2009 na3: 33 PM
Iwe unoita basa rakanaka rekuratidzira icho chivakwa chehukama ichiri musimboti wekutengesa kuita kwehunyanzvi Nekudaro, dzimwe dzenzira dzakachinja kana kukwidziridzwa.
Ini ndinofunga vanhu vari kushaya mumwe chaiwo mukana pavanobvisa pasocial media senzira yekuziva mukana uye nekukurumidza kuita chibvumirano kugadzira hukama.
Ndira 5, 2017 na3: 16 PM
Kukura kwakasimba kutumira shamwari netiweki kunogona kuve nekukanganisa kwakawanda pane rako bhizinesi pane chero chero chinhu chipi zvacho chaunoita gore rino. Shandisa zvishandiso zvemahara seReferrals-In.com kuwedzera LinkedIn yekukura yako yekuendesa shamwari netiweki.